I-Semalt ichaza indlela yokukhusela ii-Pop-Up ezongezelelweyo kwi-Windows
Ekubeni ngowama-2017, kulungile ukuba iteknoloji ithathe ubomi bethu ixesha elide ngoku. I-intanethi ngoku idibanisa amadivayisi amaninzi kunye nangaphezulu kwisibini, kwaye isixa solwazi oludlula kuyo lukhulu kakhulu. Ngokutsho kukaLisa Mitchell, u-10 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, le nyaniso inika ezininzi izinto kunye neenzuzo, kodwa nazo ziza kunye nemiba embalwa, enye yeyona nto ihlala iphazamisayo kubasebenzisi: ukujongana neentengiso ze-pop-up
Ukuba usebenzisa iWindows kwi-PC yakho, ngokuqinisekileyo awufumene le ngxaki ebomini bakho - free equipment appraisals. Emva kokufaka inkqubo, yonke into isebenza ngokugqithiseleyo, kwaye akukho miba ne-pop-ups, eqala ukuvela emva kweeseshoni zokusetyenziswa ezimbalwa. Emva kolu xesha, ingxaki iya kuba nzima ukujongana nayo, nangona kungekho nto yezo ntengiso zidibene neWindows ngokwayo. Kule nqaku, singathanda ukubonisa iindlela ezimbalwa zokusombulula enye yeengxaki ezibalulekileyo zokukhangela i-intanethi: njani ukukhusela iintengiso ze-pop-ups.
Ngaphambi kokuba siqalise ngokucoca, singathanda ukuthatha isikhashana ukuchaza apho aba bantu bavela khona. Ekubeni bengabikho kwiWindows, imvelaphi yabo ihlala kwiziko lewebhu ezifaka i-malware, i-adware okanye i-PUPs (Iinkqubo ezingenakunqwenelekayo). Iiprogram ezininzi zilungele ukuvelisa iziqu zabo, eyona nxalenye yengxaki. Kungakhathaliseki ukuba imvelaphi yabo, ukuvimba ukukhupha i-pop-ups yinkqubo yesigaba esiphambili: kuqala, hlambulula ikhomputer yakho nayiphi na i-malware okanye i-adware, uze usebenzise izandiso zogqirha ukuze uvimbele ama-pop-ups.
Nazi izinto ezimbalwa onokuzenza:
1..Coca ifestile yakho. Ngokuqhelekileyo, ukuqhuba inkqubo ye-anti-virus yentsholongwane efana ne-AVG ayanele. Uya kufuna udweliso olukhethekileyo, unonophelo lwezakhono, ezifana ne-Malwarebytes Anti-Malware, isiqwenga sesofthiwe esilungiselelwe ukukrazula nayiphi na i-malware ayifunayo kwikhompyutha yakho. Ngokufanayo, unokusebenzisa inkqubo efana ne-AdWCleaner ukususa i-Adware. Le nkqubo ikhululekile ukuyisebenzisa kwaye iluncedo kakhulu, qwa lasela xa usebenzisa, njengoko ungafuni ukususa into ebalulekileyo ngengozi okanye ngokukhuseleka.
2. Faka ifayile ye-add-ons. Uninzi lwe-add-on lusebenza kwiiphequluli ezininzi: Google Chrome, Firefox, Edge, Opera okanye Safari. Ezi zongezelelweyo zijolise ngokuhlalutya izithuthi kwaye zivimbela nayiphi na i-pop-ups ayifumanayo. Isilungiselelo singabonwa phantsi kwe menu "Okuqukethwe" kwiinketho zesiphequluli, kwaye uvakale into ethile emigqeni ye "Musa ukuvumela nayiphi na indawo ukuba ibonise ukuphuma" - lo mzekelo uvela kwi-Chrome. Nangona iiphequluli ziza kunye ne-blocker-blocker, siyakhuthaza ukufaka enye eyongezelelweyo njenge-Ghostery, iBlock Origin okanye i-AdBlock kunye.
3. Yeka foistware kunye ne-Windows yentengiso. Kukho iiwebhsayithi ezisemthethweni ezinqwenela ukusebenzisa i-pop-ups, njenge-Ask, iMicrosoft Bing okanye iGoogle. Ezi ziza kufaka iPUPs ngokuzenzekelayo xa ukhetha ingcaciso ecacileyo yokufaka nayiphi na imveliso yazo. Nokuba ukhumbule oko uhlolisayo okanye ungakhangeli ngexesha lokufakela, okanye sebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba yi-Unchecky, enokukwenza oko nangemva kokufaka isoftware.
Ngapha koko, i-Windows 10 ifumanekile ngoku. Akunakucasula njengabanye, ngokuqinisekileyo, kodwa kunika "iiprogram eziphakanyisiweyo" kwimenyu yokuqala. Ukuze ususe abo, nqakraza ngakwesokudla kwileyili uze ukhethe "ukususa onke amacebiso."
Siyathemba ukuba izikhokelo zethu malunga nendlela yokukrazula i-add-ons ziza kuphucula kakhulu i-browsing yakho ye-browsing kunye ne-web. I-Pop-ups enye yezinto ezixhalabisayo kakhulu ukuhlangabezana nazo ngeli xesha, kwaye akukho mntu kufuneka ahlupheke ngakumbi kunokuba kuyimfuneko.